पेटलाई स्वस्थ र बलियो राख्न के गर्ने – Democracy Nepal
पेटलाई स्वस्थ र बलियो राख्न के गर्ने
हामी जस्तो खान्छौं, त्यस्तै बन्छौं । किनभने हामीले खाएको खानेकुराबाट नै हाम्रो शरीरका कोषहरु निर्माण हुने हो । खानेकुरा खाइसकेपछि हाम्रो पाचन यन्त्रले कसरी काम गर्छ ? पाचनको प्रक्रिया मुखबाट सुरु हुन्छ, जहाँ दाँतले भोजनलाई पिसेर ¥यालमा रहेका इन्जाइम्सले यसलाई टुक्र्याउन सुरु गर्छ । पाचनतन्त्रले खानेकुरालाई सानो सानो टुक्रामा, जस्तै ग्लुकोज, एमिनो एसिड, फ्याटी एसिडमा तोड्छ । त्य त्यसपछि आधा पचेको भोजन हाम्रो सानो आन्द्रामा पुग्छ । पौष्टिक तत्व तपाईंको रगतमा समाहित हुन्छन् र शरीरका विभिन्न भागमा पुग्छन् । त्यसपछि भोजनलाई ठूलो आन्द्रामा पठाइन्छ । र, यसका उपयोगी पदार्थहरु शरीरले ग्रहण गर्छ । बाँकी भोजन त्यागका लागि ठूलो आन्द्राबाट बाहिर निकालिन्छ । यति जटिल पाचनतन्त्रलाई स्वस्थ राख्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । तर कसरी ?
जडिबुटी र मसलाले भोजनमा स्वाद मात्रै बढाउँदैन, बल्कि यसले तपाईंको पाचनमा पनि सहयोग पुग्दछ । यसको स्वाद र गन्ध दुवै ग्यास्ट्रिक पैदा गर्न सहायक हुन्छ । उदाहरणका लागि धनिया, अदुवा, जिरा, मरिच, खुर्सानी र बेसारले तपाईंको पित्त अम्ललाई बढाएर कार्बोहाइड्रट र बोसोलाई पचाउन मद्दत गर्दछ।
Previous कक्षा १२ को परीक्षा तयारीमा विद्यालय
निर्वाचन आयोग पुगेर रेशम चौधरीले सुनाए यस्तो कविता
बझाङमा सहकारी संस्थाको जिपमा अज्ञात समूहबाट आगजनी
चीनमा फेरि देखियो कोरोना देखियो, संक्रमण फैलनसक्ने चेतावनी